Umququzeleli womsitho eKorea | Umququzeleli wengqungquthela eKorea
1. Indawo eyahlukileyo
Umthamo: I-5 Hall, Ukuma: 200 ~ 1,500, kuhleli: 150 ~ 1,300 (Icandelo: Umntu)
Uyilo / iTrendy / 5 Space eneZibonelelo ze15
Umthamo: I-8 Hall, Ukuma: 80 ~ 1,000, kuhleli: 60 ~ 500 (Icandelo: Umntu)
Igadi / iVenkile / yeNtshona
Umthamo: I-10 Hall, Ukuma: 50 ~ 100, kuhleli: 20 ~ 146 (Icandelo: Umntu)
I-Korea yaseKorea iRoyal Cuisine Ukusebenza kweKorea
Umthamo: I-5 Hall, Ukuma: 60 ~ 200, kuhleli: 40 ~ 120 (Icandelo: Umntu)
I-Hanok / Imbali / imbono yendalo
Umthamo: I-2 Hall, emi: ayifumanekanga, ihleli: 60 ~ 197 (Icandelo: Umntu)
Umboniso / ukujonga ebusuku
Isiqithi seLwandle lweSevit (Sevit ethile)
Umthamo: I-4 Hall, Ukuma: 300 ~ 1,000, kuhleli: 160 ~ 550 (Icandelo: Umntu)
Umbono weHan-river View / Umhlaba wokuqala wokuhambahamba emanzini
2. Ukhenketho Olukhethekileyo
Funda ubugcisa beTaekwondo
Korea amava okupheka
I-Etourism ibonelela ngemicimbi esebenzisana nemisebenzi eyahlukileyo yokwakha iqela, inkuthazo yenkampani okanye umvuzo. Zibandakanye kwimisebenzi yomzimba enje ngeK-pop umdaniso waseKorea wokutya weklasi, kunye neTaekwondo enokwenziwa ngokukodwa eKorea. Iziganeko ziya kuvumela abasebenzi ukuba bade kude neofisi kwaye babe nexesha lokuphumla kwaye bavumele iimbono ezintsha zihambe. Iinkampani zamkelekile ukuba zikhethe ukhenketho olusungulwe ngaphambili okanye isicelo sokhenketho olungiselelwe ngokusekelwe kwiinjongo zeqela kunye nezinto ezithandayo.
3. Ulawulo lokuHamba
I-Etourism yinkampani yolawulo lwendawo ekuphela kwayo ephethe indawo yokuhlala, ezothutho, iindawo zenkomfa, iindawo zokutyela, imicimbi enezihloko kunye nokutya kweGala. Iinkcukacha ezilawulwa ngononophelo zikhokelela kulungelelwano olugudileyo, oluvumela iinkampani eziphambili ukuba zijolise kwi-ajenda yomsebenzi okanye iintlanganiso.
Ukusuka kwiihotele zeenkwenkwezi zanamhlanje ze-5 ukuya kwiihotele zesitayile saseKorea, i-Etourism inokubonelela ngendawo yokuhlala ezahlukeneyo.
Khetha ngokukhululekileyo iintlobo zeemoto kwi-45 setha ibhasi, i-25 ibhasi ye-sete deluxe, i-7 ~ 9seater van ukuya kwi-Sedan yeenqununu zenkampani okanye amagosa aphezulu.
Amandla omntu kunye noMphathi weProjekthi
Ukuzondla kuhlala kulungele ukunceda iimfuno zakho zokwenza ukuba iintlanganiso zakho ziphumelele.
Ukutya (Buffet okanye ikhosi)
Isiselo & Utywala
Ukusebenza (K-pop, DJ, njl. Njl.)